लम्जुङमा कागती नर्सरी – www.janabato.com
लम्जुङमा कागती नर्सरी
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०६:१३ March 12, 2019 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
लमजुङ । लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका १, कुन्छामा एक परिवारले डेढ लाख कागतीका बिरुवा रहेको नर्सरी स्थापना गरेको छ । चितवन बसाइँ सरेर गएका ५५ वर्षीय गोवद्र्धन गौलीको परिवार पुनः गाउँ फर्केर कागती नर्सरीलगायतका कृषि कार्यमा लागेको हो । आफ्नो दुई सय रोपनी जग्गा र थप दुई सय रोपनी जग्गा किनेर चार सय रोपनी जग्गामा कागती, सुन्तला, अदुवा, कफी खेती गर्नुका साथै कागतीको नर्सरी गरिएको गौलीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार करिब १५ रोपनी जग्गामा कागतीका बिरुवा छन् । कागती नर्सरी मात्रै नेपालको सबैभन्दा ठूलो रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘हाइडेन्सिटी’ प्रविधिमार्फत चार हजार पाँच सय कागती र पाँच सय सुन्तलाका बोट लगाइएका छन् । कफी र अदुवा खेती पनि शुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भैँसी र बाख्रापालन पनि थाल्नुभएको छ ।
कागतीका बिरुवाका लागि भोजपुर, धनकुटा, गुल्मी, जाजरकोट र तनहुँबाट २० क्विन्टल कागती ल्याएर बीउ राखिएको थियो । नर्सरीमा सुन कागती १, सुन कागती २ र तेह्रथुम लोकल कागतीका बिरुवा छन् । पाइनपल र वासिङ्टन डीसी प्रजातिका जुनार साथै खुखु, उन्सु, मर्कट, किन्नु, ओता प्रजातिका सुन्तला पनि नर्सरीमा लगाइएको छ । कलमीका लागि कागतीका १३ वटा ‘मदर प्लान्ट’ रहेको ‘हाइटेक’ नर्सरीसमेत स्थापना गरिएको छ । गत वर्ष कागतीका बिरुवा बिक्रीबाटै १२ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको गौलीले बताउनुभयो । प्रतिबिरुवा ४० रुपियाँमा बिक्री गरिएको थियो । यस वर्ष ४० लाख रुपियाँ आम्दानी हुने उहाँले अनुमान गर्नुभयो ।
१० वर्ष चितवन बसेका गौली श्रीमती तारा भट्टराई गौलीलाई लिएर गाउँ फर्कनुभएको हो । यसअघिको घरजग्गा कारोबारको जिम्मा छोरा सम्बद्र्धन गौलीलाई दिइएको छ । गाउँको जग्गामा घर बनाएर हिर्कुस एग्रो फार्म प्रालि सञ्चालन गरी कृषि कर्ममा लागेको फार्मका सञ्चालिका तारा भट्टराई गौलीले बताउनुभयो ।
पाँच करोड रुपियाँ लगानी गरिएको उक्त फर्ममा ६५ प्रतिशत सेयर उहाँको नाममा छ । बाँकी सेयर गोवद्र्धन, छोरा सम्बद्र्धन र छोरी कुञ्जको नाममा छ ।
कुल चार सय रोपनी जग्गा रहे पनि हाल डेढ सय रोपनी जग्गा प्रयोगमा छ । बाँकीमा कागती, सुन्तलालगायत खेती गर्ने तयारी गरिएको छ । सिँचाइका लागि दुई किलोमिटर तल ताप्ले खोलाबाट पानी लिफ्टिङ गरी ल्याइएको छ । पाँच÷पाँच हजार क्षमताको चार वटा ट्याङ्की राखिएको छ । यसका लागि फलफूल तथा सुन्तला जात बाली विकास परियोजना कीर्तिपुरले २० लाख अनुदान दिएको थियो ।
गाउँका किसानलाई लक्षित गरी पाताल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट गाउँका किसानलाई कृषिमा ऋण दिने र बचत गराउने गरिएको छ ।
गाउँलेले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गरिएको हिर्कुसका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सहकारीका अध्यक्ष गोवद्र्धन गौलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार फर्ममा मात्रै १६ जनालाई रोजगारी दिइएको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि चितवन झर्नुभएका गौलीले बीएससी पास गरेपछि पाल्पाको एक विद्यालयमा १० वर्ष पढाएको बताउनुभयो । शिक्षण पेसा छोडेर तत्कालीन विद्रोही माओवादी पाटीमा प्रवेश गरी भूमिगत हुनुभएका उहाँ दुई वर्ष जेल पनि पर्नुभयो । त्यसपछि झापाबाट चिया ल्याएर चितवन चिया उद्योग खोली साइकलमा घरसेवा दिन थाल्नुभयो । चियाबाट केही पैसा आर्जन गरेँ । त्यसपछि घरजग्गा कारोबारमा लागेंँ, उहाँले भन्नुभयो, १० वर्षसम्मको घरजग्गा कारोबार छोडेर सरकारी अभियान समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको नारालाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग पु¥याउन गाउँ फर्की कृषि कर्ममा लागेँ ।
यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा बेलिना थापाले लेखेकी छन् ।
← बुटवलको श्रम कार्यालय सीप विकास तालिम केन्द्र (वेसक्याम्प) मा सार्ने तयारी
देशैभर बन्दको प्रभाव, बुटवल लगायत सहरहरुमा बम, ट्रकमा आगजनी →
उत्तर कोरियाले अमेरिकाको ९० प्रतिशत जनसंख्या नाश गर्न सक्छ : सिआइए
९ कार्तिक २०७४, बिहीबार ११:०० जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on उत्तर कोरियाले अमेरिकाको ९० प्रतिशत जनसंख्या नाश गर्न सक्छ : सिआइए
किन गरियो सलमान खान सम्मिलित कार्यक्रमको विरोध ?
२ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०५:०१ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on किन गरियो सलमान खान सम्मिलित कार्यक्रमको विरोध ?